An eco-friendly home that is sensitive to its context yet hasa‘wow’ factor. A Nautical theme was chosen to drive the design and form of the house, evoking images of sailboats, the ocean, waves and movement. Where there is no view of the ocean, the walls and built in elements of the spaces are curved to giveaconstant reminder of the seafront context of the home. The roof form was conceived of asasinuous wave form that not only echoes the nautical theme, but maximizes the useable space.
ဤ သဘဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကိုက်ညီသည့် (eco-friendly) အိမ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီပြီး ခန့်ညားပါသည်။ ဤအိမ်အတွက် သင်္ဘော၊ ပင်လယ်၊ လှိုင်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုကို အောက်မေ့စေသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ပင်လယ်ကို အဓိက ဖြစ်စေရန် ပင်လယ်ရှုခင်း မရှိသည့်နေရာများမှာ နံရံကို ကွေးသည့်ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ပါသည်။ ခေါင်မိုး ပုံသဏ္ဍာန် လှိုင်းကဲ့သို့ ကွေးပြီး အိမ်အတွင်းပိုင်းနေရာများကို ကျယ်ပြန့်စေသည်။
Экологичный дом сразу же производит неизгладимое впечатление. Морская тема была выбрана для создания дизайна и формы здания, пробуждая образы лодок, океана, волн и движения. В местах, где нет вида на океан, стены и встроенные элементы интерьера имеют изгибы, которые постоянно напоминают о морской тематике дома. Крыша была спроектирована в форме волны, которая не только перекликается с общей тематикой, но и максимально увеличивает используемое пространство.